EMULATORS ugu kicitimay dalwaddii
Wiilkan dalwaddii sidoo kale loo yaqaan VR-32 waa 32-yara video 3D Console kulan ee ay soo Nintendo. Waxaa la suuq sababta oo ah "la qaadi karo" Console kulankii 1aad awood u bandhigeen "sawiro 3D run" baxay sanduuqa. Waxaa la xaqiijiyey in ay ku fashilmeen in boor iyo ma ahaa lacag la'aan ah in gobollada kala duwan. Its soo dhaweynta negative ahaa ay macneheedu tahay sii dhibcood ku kacaya. Nintendo la baabiiyo sanadka ku xiga maalinta, 1996. The Virtual Boy waa Nintendo ee ugu adeegta Console ugu hooseeya. Processor ugu weyn waxaa laga yaabaa in 32-yara RISC jab, samaynta Boy Virtual nidaamka 32-yara 1aad ee Nintendo. Nidaamka Boy Virtual isticmaalaa isku day ah ee 1 × 224 arrays toosan (hal il) iyo ayi-garoocad uu baaritaanku soo diyaariyeen oo dhan beerta isha ee gudbisid akhri muraayadaha oscillatory guri. Muraayadaha Kuwani iyo dib xawaare aad u gariiro sare, si qaylada cunnaha farsamada oo uu ka gudahood unugga.
Processor: 32-yara RISC processor socda at 20 MHz
Xasuusta: 1 MB ee DRAM iyo 512 KB ee PSRAM
Kaydinta Habka: gaariyo
Ra'yiga: 6 button xukuma
SABABTA HORUMARINTA EMULATOR ugu kicitimay dalwaddii:
Maanta waxaan heysanaa badan qalabka Console sare aan ku raaxaysan karaan, dadka qaarkood ayaa weli jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro Nintendo 64 horumariyo kulan ee nidaamka, si horumarinta la shaqeeyay tan sano oo isku dayaya in ay ku daydaan 64 Nintendo hababka gal ah qalab cusub oo horumarsan.
Nidaamyada hawlgalka lagu taageeray laguna Aragtida hab Wiilkana dalwaddii:
TOP 5 emulators Boy Virtual:
VBjin laga yaabaa in emulator ah Virtual Boy loogu dhufto ee Windows. Waxay ka timaadaa laga guurayo ee emulator PCEjin la core Boy Virtual ka mednafen.9 ah. VBjin taageerada rerecording iyo emulator Virtual Boy TAS tools.VBjin-OVR u Rift ah, ee ay soo humaagga "jaymat." The Virtual Boy, haddii aadan ahaayeen nool waxaa mar lacag la'aan ah, ahaa-magaabo VR qalab red-madow, Nintendo ee, oo gabi ahaanba waxay ahayd mid ku saabsan dilay Gobolada dalka.
Loading ROM ka feature line amarka.
Tayada codka Great.
Qaab filaayo in waddaa kulan si habsami leh.
Waddaa inta badan kulan wiil muuqaal ah.
Taageero qalab bandhigay Oculus Rift VR.
2. RED masduulaagii EMULATOR:
Emulator Tani waxaa ugu duub ku salaysan PC-emulator. Marka laga soo tago fursadaha Debug kala duwan, badbaadin dalalka, khiyaameeya, iyo xaasidnimo dhawaaqa, Red Dragon sidoo kale isboortiga ayaa ah muuqaalada waafaqsan mid aad u sarreeya, Dragon waa ka fog tahay mid ka mid ah emulators ugu isticmaali karo Boy Virtual laga heli by. Waxa aad si adag oo ku salaysan xeerka isha dhabta Boy iyo waxa uu soo bandhigay gui ah iyo sidoo kale dekeda Windows aadka loogu baahan yahay ee emulator ah. Currently, version Windows ee Red Dragon si buuxda u qaldan ama wax yar ka ciyaari kara ilaa 20 horyaal. Waayo, hadda, Red Dragon waa bet ugu wanaagsan ee qof ku heysa inay dib-u-ku nooshahay a yar oo ka mid ah Classics Boy Virtual.
Emulator Aad u deggan waddaa inta badan kulan wiil muuqaal ah.
Tiro yar cayayaanka yar yar
3. Tassna wiil EMULATOR:
Tassna wiil waa DOS, Windows, iyo UNIX Dad horayn ku salaysan, ee ay soo David Mj. Waxaa horumarinta bilaabay sida ugu horreysa ee 1997. Waxaa fursadaha xaggooda daacad ah iyo xaasidnimo tayo leh. nasiib daro mashruuca dhaco iyo horumarinta waqti ka waqti, inkastoo abuuraha ayaa ku mashquulsan isku dayeen in ay dekedda u Madaxweyne Siilaanyo iyo meelo kale sababo fara badan. File ASCII qoraalka waa mid dheer oo la heli karo si xor ah ku shabaqa. Ugu siddeetan lix waafaqsan, waxa uu presupposed in ay leeyihiin heerka ugu fiican.
4. dalwaddii E EMULATOR:
Virtual-E waa emulator ah Windows ku salaysan ee Boy Virtual in ay ahayd in horumarka ah tan iyo 1999 by Alberto Covarrubias. Inkastoo horumarinta joogto ah dhowrkii sano ee ugu horeeya, waxaa nasiib u muuqday in ay la saaray ay nasasho ka dib markii ay sii daayo hore. Goobta horumarinta ma uusan u cusbooneysiin laga bilaabo 2003 ilaa 2008, oo aan updated tan. Si kastaba ha ahaatee, mashruuca ayaa sidoo kale ka mid ahaa ay ogaadeen hab lagu xidhi Boy ah Virtual in PC ah via dekedda IO in ay curiyaan image 3D ah shaashadda kumbiyuutarka
Xiriiriyaan in PC dhex Dekedaha IO.
Gacanta ku Configurable
Play badan oo kulan
User saaxiibtinimo UI
Shilalka mararka qaar badan oo kutaan
Baahan yahay PC degdeg ah si uu ugu tartamo kulan
Vibe waxaa lagu soo bandhigay in 2008 by Gil Pedersen iyo Richard Bannister. Waxaa hadda waa Mac emulator oo kaliya Boy Virtual. Inkasta oo ay emulates si fiican, ma ahan si buuxda u la jaan qaada ciyaaraha oo dhan (qiyaastii 59% ka mid ah maktabadda waa playable). Iyadoo nasiib kasta oo mashruuca sii wadi doonaa oo waxaa jiri doona updates mustaqbalka.
Emulator Mac Kaliya Wiilkana dalwaddii
Weli hoos horumarinta lahayn qaababka aan caadi ahayn.
Horumarinta sii wadi doonto.
> Resource > Emulator > Top 5 Emulators Boy Virtual u isagana